Metelaada Xubnaha Aqalka Sare ee gobolka Banaadir oo ah Mid Kumeel Gaar Ah -
Home News Metelaada Xubnaha Aqalka Sare ee gobolka Banaadir oo ah Mid Kumeel Gaar...
Metelaada Xubnaha Aqalka Sare ee gobolka Banaadir oo ah Mid Kumeel Gaar Ah
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maanta saxiixay in gobolka Banaadir uu ku yeesho 13 kursi, kuraasta Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11aad,ayaa qoraalka uu saxiixay Madaxweynaha waxaa ka muuqda in Kuraastaasi ay yihiin kuwo kumeel gaar ah oo aan rasmi ahayn.
Qoraalka uu saxiixay Madaxweyne Farmaajo ayaa qodobkiisa 2aad waxaa ku qoran sidan;
“Si waafaqsan go’aankii golaha shacabka, gobolka Banaadir wuxuu ku yeelanayaa Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11aad Metelaad 13 kursi oo kumeel gaar ah inta laga dhamaystirayo Dib U Eegista Dasturka Kumeel gaarka ah.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa u cuskuday saxiixida qoraalkan in uu yahay qaraar ay Golaha Shacabka JFS u soo gudbiyeen kaasoo ku saabsanaa Matalaadda uu Gobolka Banaadir ku yeelanayo Golaha Aqalka Sare.
Si kasta ha ahaatee, waxaa ka is weydiinayaa in Senatarada kuraastan ku fariista inay la mid noqon doonaan senatarada kale ee metalaya dowlad goboleedyada dalka maadaama kuraasta gobolka Banaadir ay yihiin kuwo kumeel gaar ah.
Metelaada kuraasta Aqalka Sare ay ka helayaan gobolka Banaadir ayaa kumeelgaar sii ahaanaya illaa dastuurka dalka uu ka noqdo mid rasmi ah oo ah laga qaado afti guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Previous articleMacron weighs up a third lock despite signs that the French ‘can’t take it anymore’
Next articleUS “outraged” by Pakistani order to release man convicted of Daniel Pearl murder
Turkiga oo ku riixaya Soomaaliya iyo Kenya inay ka wada hadlaan Kiiska Badda